News - Wadnaha taageere koronto ee ugu weyn warshadaha Shiinaha, oo ay soo saartay BEJARM
Qalab aan xad lahayn
Wadnaha taageere koronto warshadeed ee ugu weyn Shiinaha, oo ay soo saarto BEJARM
Matoorku waa qalab u roga tamarta korantada tamar farsamo. Mashiinnada, waa sida wadnaha oo kale, oo siiya awood ay ku shaqeyso. Bejarm oo ku taal degmadeena, waa shirkad noocan oo kale ah oo ku takhasustay R & D iyo hal-abuurka mootada.
Degmada warshadaha ee shirkadda Bejarm, waxaa jira taageere weyn oo sudhan dusha sare ee warshadda. Qaybta madow ee ku taal bartamaha taageere waa nooc ka mid ah mashiinka tooska ah ee magnet tooska loogu wado oo ay soo saartay shirkadda Bejarm si loogu tijaabiyo loona ogaado. Baalalkan taageeraha ah dhererkiisu waa 7.3 mitir,
taas oo ah dhexroorka ugu weyn ee taageerayaasha warshadaha ee Shiinaha, iyo matoorka dhexda kuyaala aad ayuu uyaryahay marka lala barbardhigo. "Marka la barbardhigo taageere weyn oo umuuqda" Big Mac ", qeybta madow ee dhexda kuyaala runtii muhiimad maleh, laakiin waa waa "wadnaha" ugu muhiimsan ee wadista marawaxadda.
Maaddaama ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee taageeraha, doorkeedu waa is muujiyaa. Si loo wado taageere intaas le'eg, matoorku wuxuu ahaan lahaa mid aad u ballaaran, oo ay ku jiraan saddex waji oo asynchronous motor iyo reducer, iwm. Laakiin iyada oo loo adeegsanayo hal-abuurnimo teknoloji ah, mugga matoorka tooska ah ee birlabta tooska ah ee ay soo saarto shirkadda waa mid aad u yar, laakiin "awoodda" ma liidato. Tusaale ahaan, taageerahan leh Bejarm matoor magnet joogto ah, oo lagu rakibay dherer ka badan 6 mitir, wuxuu dhab ahaan dabooli karaa 800 mitir oo laba jibbaara ilaa 1000 mitir murabac oo bannaan. Dadku way dareemi karaan xaaladda dabaysha dabiiciga ah. Hadda uma wareegeyso sida taageere koronto oo caadi ah oo xawaarihiisu aad u kala duwan yahay. Xawaaraha guud ee taageere koronto ee reerka waa xawaare aad u dhakhso badan, laakiin dabaysha waxaa laga yaabaa inaysan sidaa u xooganayn, xawaaraha wareegtuna aad ayuu u gaabiyaa, kaliya 50 ilaa 70 leexasho daqiiqaddii, laakiin wuxuu leeyahay mug hawo badan. Marawaxaddu waxay kicisaa socodka hawada ee booska oo dhan, taas oo u oggolaan karta jidhka bini'aadamka inuu dareemo raaxo aad u badan maxaa yeelay ma jiro dareen cufan oo qabow fudud ee goobta xiran.
Taageerayaasha warshadaha ee aadka u waaweyn ee magnet-ka ah ee tooska ah ayaa lagu rakibi karaa deegaanno badan, sida suuqyada khudradda, suuqyada waaweyn, garoomada kubbadda koleyga ee gudaha, jimicsi, dhir warshadeed iyo wixii la mid ah. Intaa waxaa dheer, isticmaalka korontada ayaa aad u hooseeya, in ka yar hal darajo saacaddiiba. Waqtigaan la joogo, iyada oo loo marayo tijaabinta hordhaca ah ee Shanghai, Suzhou iyo Ningbo, mootada joogtada ah ee si toos ah u wadata mootada ay soo saartay Bejarm mootada ayaa heshay waxqabadka dhawaqa hooseeya iyo saameynta wanaagsan, taas oo macnaheedu yahay inay leedahay rajo suuq ballaaran ayna ku noqon doonto "rajo" suuqa sanadka soo socda.
Suuqa taageerayaasha warshadaha ayaa ah mid aad looga fiirsan doono sanadka soo socda, waxaana mugga iibka la filayaa inuu noqdo 5000 ilaa 10000. Haddii aan eegno kaliya iibinta matoorrada iyo darawalada, waxay u badan tahay inay gaarto 10 milyan ilaa 20 milyan. Intaa waxaa sii dheer, kooxo badan oo R & D ah oo ka socda shirkadda Bejarm ayaa isla mar ahaantaana horumarinaya codsiyo awood leh oo aad loo isku halayn karo lana xakameyn karo dhinacyo badan, sida biyaha caqliga badan, dhalinta tamarta dabaysha, qalabaynta warshadaha, qalabka wiishka (wiishka), iwm. mustaqbalka, shirkadda Bejarm waxay si weyn u isticmaali doontaa qalab badan si ay u siiso awood tiknoolajiyad casri ah hoggaamineysa.
Waqtiga boostada: Abriil-08-2021
Cinwaanka: HuiRun Dhismaha No.1, No.277 DanFeng Road, Degmada WuZhong, Magaalada SuZhou, Gobolka JiangSu, Shiinaha
Wadnaha kuwa ugu waaweyn ee warshadaha la doorto ...
Wadnaha el-warshadaha ugu weyn ...
Badbaadada taageerayaasha warshadaha
Badbaadada taageerayaasha warshadaha Bejarm i ...
Soosaarayaasha taageerayaasha Warshadaha Bejarm ...
Soosaarayaasha taageereyaasha Bejarm Warshadaha noqo ...